MY REMEMBRANCE: ချစ်နေဖို့ပဲ လိုပါသည်
Posted by puluque at Tuesday, October 14, 2008
ကျတော်ကတော့ “အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေဖို့ပဲ လိုပါသည်။”
“အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေဖို့ပဲ လိုပါသည်။” ဟိ ဟိ၊ အဲဒါ စိုင်းစိုင်းသီချင်းထဲက စာသားလားလို့။
ဟိ ဟိ။ စတာနော်။ အချစ်အကြောင်းရေးထားတာ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ပိုပိုပြီး နားလည်တော့ဘူး။ :P :P
အချစ်ရဲ့ ဒဿနများကတော့ ကုန်နိုင်ဘူးနော့် နောက်ဆုံးရတဲ့ အချက်အလက်ကတော့ “အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေဖို့ပဲ လိုပါသည်“ တဲ့ ဟီး တော်တော်ရှုပ်တဲ့ အချစ် များလိုက်တဲ့ ဒဿနတွေ ကိုကြီးပုလုရေ စွန့်စားဖို့လဲ လိုမယ်နော့်...
ရေနွေးကြမ်းတွေ သိပ်မသောက်နဲ့။ သောက်တာများလို့ သေးပေါက်ချင်ရင် အိမ်သာရှာရခက်နေမယ်။ အဲဒီ တရုတ်မက စလုံးမှာ ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စသိပ်မရှိပါဘူး။ သေးပေါက်ချင်ရင် MRT ဘူတာကို ပြေးပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် Shopping Center ကို ရှာကွယ်။ ဟုတ်ပြီလား။ အဲငှယ်။
ဝမ်းတူးသရီး ကိုယ်ချစ်သွားပြီ ရေရေလည်လည်ရှင်းရှင်းပြောရင် ဝေါ်အိုက်နီ
ဒါပဲမဟုတ်လား မင်းသီချင်းက ဟဟ
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေနိုင်လောက်တဲ့ အနေအထား
မှာရှိနေတဲ့ အတွက် “အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်”
ဆိုတဲ့ တစ်ဖက်သတ်စကားလေးကို အစ်မလက်မခံလို
တမျိုးပေါ့နော်... လက်ခံရမှာပေါ့... ဒါပေမယ့် မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးတို့ရဲ့ ရင်ထဲက သံယောဇဉ်တွေ
၊ အချစ်တွေကို အစ်မမြင်နေရပါတယ်...
ညီမလေးဘက်ကလည်း မောင်လေးကို တကယ်ချစ်နေ
တာသေခြာရင် မောင်လေးဖွင့်ပြောတာ အကောင်းဆုံးပါ
လို့ အစ်မအကြံပေးပါရစေ... အချစ်ဆိုတာ ယောကျာင်္လေးဘက်က မဖွင့်ပြောရင် မိန်းကလေးဘက်
က ကြိတ်မှိတ်ခံစားရပြီး အဝေးဆုံးကို ဝေးသွား
နိုင်ကြပါတယ်ကွယ်..... ဘယ်သူ့ဘက်က မဖြစ်နိုင်တာလဲ.... ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင် မောင်လေး ဖွင့်
ပြောသင့်တယ်.. ဖွင့်ပြောရမယ်လေ.... ဖွင့်ပြောပြီးမှ
အခြေအနေအကြောင်းကြောင်း ကြောင့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆို
ဒါပေမယ့် မောင်လေးရင်ထဲမှာ ရှိတာကို မောင်လေး
ထုတ်ပြောပြရပါမယ်... ညီမလေးကလည်း မောင်လေး
ပြောတဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ကြည်နူးစွာ
လက်ခံ နားထောင်စေချင်ပါတယ်.... ဖွင့်ပြောကြပြီးမှ
သူက ငါ့ကိုချစ်တယ်.. ငါကလည်းသူ့ကိုချစ်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် တို့နှစ်ယောက် အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခွဲခဲ့ရတယ်ဆိုရင်
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ခံစားရတာ နည်းနည်း
သက်သာသွားမယ်လို့ အစ်မထင်ပါတယ် ပုလုကွေးရေ.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီမလေးကို ဖွင့်ပြောရမှာ ယောကျာင်္းလေး
ဖွင့် ပြောလိုက်နော်....အစ်မ အားပေးမယ်...ညီမလေးကို
ကြည့်ရတာ မောင်လေးအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိပုံရပါတယ်.
ကျေးဇူးပြုပြီး အစ်မရေးထားတဲ့ “ဒိုင်ယာရီဟောင်းရဲ့စာ
မျက်နှာ” ပို့စ်လေးကို လာဖတ်ကြည့်ပါနော်...
Tae so dae sar par lar ha..
Khu mha phat mi tar naut tg kya twer dae....
You should try to propose her if you really want her as your life partner.
I also agree Ma War comment :)